Alitalia: the Lufthansa hypothesis returns | Airline News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Alitalia: miverina ny hypothèse Lufthansa
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao Alemanina • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Alitalia: miverina ny hypothèse Lufthansa
Febroary 23, 2021
Avy amin'ny Delta Air Lines mankany EasyJet mankany amin'ny Airline Lufthansa, ny fahalianana amin'ny fividianana kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Alitalia dia nandalo fanovana maro azo nanomboka tamin'ny 2017.
Tsy maintsy amidy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka italiana, fa an'iza?
Ny valiny dia toa manombatombana tsy tapaka ary miova hatrany.
Hivoaka ho mpandresy ve i Lufthansa amin'ny fijanonana amin'ny lalao?
Ny sidina fiaramanidina italiana Alitalia dia miroso mankany amin'ny fivarotana ny fananany - voalohany mankany amin'ny Fanjakana ary avy eo dia mety mankany amin'ny orinasa mpanamory fiaramanidina alemana malaza Lufthansa.
Lufthansa miverina amin'ny làlana izay liana amin'ny mividy Alitalia izay hametraka fiaramanidina, fananana ary marika ao amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Cityliner. Ny Minisiteran'ny Toekarena toy izao dia hahita ny hamerenana ny volany. Farany, afaka nihetsika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa hafa ilay mpandraharaha alemanina. Ity no mety ho drafitra hafa amin'ny latabatra amin'ny governemantan'i Italia Minster Draghi, hoy izy Ny Repoblika ary La Stampa.
Tombanina ny vahaolana mba hitazomana ny tetik'asa, hampihena ny fahasahiranana ho an'ny mpiasa ary indrindra indrindra, ny fiezahana amin'ny lafiny iray hampifaly an'i Eropa izay mangataka ny tsy fitohizan'ny orinasa taloha sy vaovao ary ny iray hafa manandrana mametraka ilay orinasa vaovao amin'ny toerana azo antoka sy lalana maharitra.
Drafitra amin'ny dingana telo
Ahitana dingana telo ny drafitra. Ny voalohany dia nahita ny kaomisera Giuseppe Leogrande ho mpiorina voalohany, izay afaka nanome orinasa hafa ary avy eo ny Ministeran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola (MEF), ny fananana rehetra an'ny Alitalia taloha hatramin'ny fiaramanidina ka hatramin'ny trano, hatramin'ny marika, anisan'izany ireo teboka sy zotra Millemiglia , ary koa ny ampahany lehibe amin'ny mpiasa. Vinavina ny fivarotana ireo fananana rehetra ireo tamin'i Cityliner. Ampahan'ny fiaramanidina fiaramanidina; mpiasa 5,500 XNUMX eo ho eo; ary ny hetsika sidina, fikojakojana ary fikirakirana rehetra dia ho tafiditra ao.
Amin'ny dingana faharoa, hamidy amin'ny MEF i Cityliner. Raha vantany vao natolotra ny MEf ireo fananana sy mpiasa ireo, ny Minisiteran'ny Toekarena dia afaka nanankina an'i Cityliner ny asa hamerenana amin'ny fotoana fohy satria nomena ny fahazoan-dàlana. Ity dia safidy hafa ankoatry ny fanoloana ny famoronana na fampiasana orinasa ad-hoc, ohatra, ITA - Italia Air Transport (Italia Trasporto Aereo). Ity orinasa vao teraka ity dia tokony nampiditra an'i Alitalia ho ao anatin'ny drafitry ny governemanta Conte.
Ny dingana fahatelo sy farany dia fanomanana ny fidiran'i Lufthansa ao an-drenivohitra Cityliner amin'ny fomba sy ny isan-jato mbola hosoratana. Averina amin'ny fanjakana amin'ny alàlan'ny Cityliner ireo fampindramam-bola avy eo, ka manome fahafaham-po ny fitakian'i Eoropa, ary ny ankamaroan'ny mpiasa dia ho voaro. Amin'izao fotoana izao dia mbola liana i Lufthansa.